Banyere Anyị - Xiamen qundeli industry & trade Co., Ltd.
Akụkọ n'azụ onye nrụpụta na akụkọ ihe mere eme
N'afọ 2005, ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ China mepụtara ngwa ngwa, mana ịdị mma ya adịghị mma, ọnụ ahịa juputara n'ahịa juputara na akwa slippers na -adabaghị n'ụkpụrụ dị mma. Mgbe mbanye China na WTO, ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi mepụtara site na mmụba na oke, mana ndị na -azụ ahịa mba ofesi katọrọ ezigbo mma mbụ na ọnụ ahịa dị ala nke ndị China mere maka slippers n'ihi ịdị adị nke ngwaahịa na -adịghị mma. N'oge a na-awakpo aha ndị China, ụfọdụ ndị na-eto eto nwere otu echiche na Jinjiang, isi obodo akpụkpọ ụkwụ China, gbakọtara wee guzobe akpụkpọ ụkwụ Qunli, nke ewepụtara maka imepụta ezigbo mma na ọnụ ala mba iji nye ndị na-azụ ahịa ihe ka mma. inwe ahụmịhe.
Akpụkpọ ụkwụ Qunli bụbu obere ụlọ ọrụ ama ama na mmepụta EVA na akwa slippers. N'oge mbụ, ọ na-ewepụta slippers dịtụ ala ma ree ya n'ahịa n'Afrịka, Middle East na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia site n'aka ndị na-ere ahịa na Yiwu na Guangdong. Ka oge na -aga, site na mmepe nke ahịa ahụ, ọ mepụtara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akpụkpọ ụkwụ ogige ọgba ọgba EVA na akpụkpọ ụkwụ. Ebe ọ bụ na 2011, ụlọ ọrụ anyị na-esonye na Canton Fair ugboro abụọ n'afọ, site na nke anyị zutere ndị ahịa dị elu sitere na Europe, America, Japan na Korea nwere ụdị mba ọzọ ama ama. A na -emeziwanye ihe ndị ahịa chọrọ maka ịdị mma ngwaahịa, a na -akwalitekwa ụdị ngwaahịa dị iche iche kwa afọ, a na -abawanyekwa n'usoro iwu.
Iji zute mkpa ndị ahịa nke ọma, kwado mbupụ ngwaahịa, ma gbasaa ọnụ ọgụgụ mmepụta na mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, anyị guzobere na 2015 Xiamen Qundeli Co. otu njikwa mma iji jeere ndị ahịa anyị ozi nke ọma, anyị na-enwe ike ịzụlite ụdị ngwaahịa dị ka mkpa ndị ahịa dị iche iche si dị n'ahịa dị iche iche, na izute ihe ụfọdụ ndị ahịa chọrọ iji aka ha wee zụlite ụdị ndị ahịa maka mmepụta na ire naanị. maka ndị ahịa. Ugbu a, Xiamen Qundeli Co., Ltd. etolitela n'ime mmepụta, nhazi na mbupụ ya na akpụkpọ ụkwụ Qunli dị ka etiti na ụfọdụ ụlọ ọrụ nwanne nwanyị dị nso dị ka Wishauer na Kukuijia dị ka ndị mmekọ.
A na -ebupu ngwaahịa anyị na Germany, France, Italy, Spain, Japan na South Korea. N'ime afọ ise gara aga, ụlọ ọrụ anyị ejirila nwayọọ nwayọọ mepụta ndị ahịa na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East na South America.
Anyị nwere ndị otu R&D ọkachamara, na -agbaso atụmatụ mba ofesi na echiche ọhụrụ. Mgbe ihe karịrị afọ iri 'mmepe, ụlọ ọrụ anyị abụrụla otu n'ime ndị na -eweta ngwaahịa kacha mma na ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ nke Jinjiang, obodo akpụkpọ ụkwụ China, na akpụkpọ ụkwụ ubi na akpụkpọ ụkwụ pụrụ iche. Ngwaahịa anyị ama ama na mba ofesi maka ịdị mma klaasị mbụ na ọnụahịa asọmpi. A na -eji ụfọdụ rọba na ihe akpụkpọ ụkwụ rọba mee ụfọdụ n'ime slippers anyị, naanị iji mepụta slippers ndị kacha ewu ewu n'ụwa.
Iji mezuo ụkpụrụ mba ụwa, ngwaahịa anyị gafere ule asambodo nchekwa gburugburu Europe, ụlọ ọrụ anyị agafewo asambodo sistemụ njikwa ogo BSCI na ISO, na-ebupu ihe ruru nde ise akpụkpọ ụkwụ dị elu kwa afọ. Iji weta ahụmịhe ụkwụ ka mma site na Jinjiang, China nye ndị na-azụ ahịa zuru ụwa ọnụ, na mgbakwunye na ọnọdụ mmepụta ODM, ụlọ ọrụ anyị na-ewulitekwa ọnọdụ OEM iji mepụta ngwaahịa ikike nke ụdị ama ama n'ụwa, dịka SAFTY JOGGER, OXPAS, FUNTOWN SHOES na ndị ọzọ ụdị ama ama nke akpụkpọ ụkwụ na-arụ ọrụ na akpụkpọ ụkwụ nchekwa, yana ụdị ikike dị ka Disney, Spider-Man, Marvel na Warner. Ndị anyị na ha na-azụkọ ahịa ogologo oge nọ n'ụwa niile, gụnyere DEFONSECA nke Italy, nke na-elekwasị anya na mmepụta akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ, yana ụfọdụ ụdị mba ụwa BATA, CORTINA, KAPPA, EMFILA, yana ụlọ ọrụ kacha ere ahịa n'ụwa niile ALDI nke Germany na Otu AUCHAN nke France.
Site na ngwaahịa dị mma na ọrụ dị egwu, anyị enwetala ihu ọma nke ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile, naanị site n'iji nlezianya na -emeso ha ka anyị nwere ike iwepụta ndị ahịa na -eguzosi ike n'ihe.
N'oge ọrịa na-efe efe, ahịa mba ụwa dị mgbagwoju anya, mana ụlọ ọrụ anyị ga-abụ onye nkwado gị kachasị ike, anyị na-anabatakwa ndị nwere mmasị isonye na nnukwu ezinụlọ Qundeli.
Ụlọ ọrụ Qunli Shoes Industry Co.Ltd. bụ akpụkpọ ụkwụ ọkachamaraụlọ ọrụ mmepụta ihe na onye na -emepụta ihe na -elekwasị anya na mmepe, nrụpụta na ire ụdị dị iche iche Akpụkpọ ụkwụ EVA gụnyere Eva Slipper, Akpụkpọ ụkwụ, Akpụkpọ ụkwụ Ogige ， Akpụkpọ ụkwụ aka aka. Ngwaahịa anyị na -ere nke ọma na Europe, USA, Japan, na obodo ma ọ bụ mpaghara ndị ọzọ gburugburu ụwa.
Ejiri ya raara onwe ya nye R&D ngalaba, Akpụkpọ ụkwụ Qunli nwere ndị otu mmepe ọkachamara nke nwere nkà ihe ọmụma ụwa na echiche ọhụrụ. Mgbe mmepe afọ 16 gasịrị, ụlọ ọrụ anyị nwere mpaghara nke 40,000 ogbako mita square na ahịrị mmepụta 10 ka anyị nwee ike ịnapụta ihe dị ka akpụkpọ ụkwụ 800,000 kwa ọnwa.
Ngwaahịa anyị niile agabigala nyocha nke ngalaba dị mma. Akpụkpọ ụkwụ Qunli ewulitela akara nke anyị - "Qunli" mgbe ogologo njikwa gachara. Ma OEM na ODM na -anabata nke ọma.
Ọhụụ ụlọ ọrụ na Omenala
Nye onye ahịa
Ọ gbanyere mkpọrọgwụ na nkà ihe ọmụma azụmaahịa anyị iji nye ndị na -azụ ahịa akpụkpọ ụkwụ ka mma ma mee ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ ma nwee ahụmịhe ka mma mgbe ha na -eji ngwaahịa anyị. Afọ ojuju ndị ahịa bụ ọkọlọtọ iji nwalee ogo ngwaahịa. Gee nzaghachi ndị ahịa, ghọta mkpa ha, kọwaa ụkpụrụ dị mma ma mee ihe niile kwere omume iji nwekwuo afọ ojuju na ntụkwasị obi ndị ahịa. Na akpụkpọ ụkwụ ọ bụla, anyị na -agba mbọ imepụta ọdịnihu ka mma, ọ bụghị naanị na anyị na -emepụta akpụkpọ ụkwụ, anyị bụkwa ndị na -ebugharị ọ happinessụ maka ndị ahịa.
Nye ngwaahịa na ọrụ ọkachamara, nye ndị ahịa ọrụ ka mma, mepụta uru dị elu, ka ndị mmekọ kwenye, mee ka ndị ahịa tụkwasị obi.
N'ịbụ ndị mmụọ siri ike sitere n'ike mmụọ nsọ ya, anyị ga-abụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma, ihe ọhụrụ na-aga n'ihu, anwa anwa ịmụta ụzọ na teknụzụ ọhụrụ iji meziwanye arụmọrụ, melite ọrụ, ọbụlagodi bụrụ ụlọ ọrụ China kacha nwee mmetụta na ime ka ndị na-emepụta akpụkpọ ụkwụ ọkachamara zuru ụwa ọnụ mara mma. nọ n'ụzọ iji gbalịsie ike ịbụ akara ụlọ ọrụ, ịkwalite ọganihu na mmepe nke ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ, na -eduga usoro ejiji.
Responsibility Ọrụ akụ na ụba: ịkwụ ụtụ isi dịka iwu siri dị bụ ọrụ kacha mkpa nke ụlọ ọrụ. Ụlọ ọrụ anyị na -etinye ụtụ isi ụlọ ọrụ dị mkpa nke ukwuu, na -erube isi n'iwu na ụkpụrụ ụtụ isi mpaghara, jiri akọ na -arụ ọrụ ụtụ isi, na -arụsi ọrụ ike na -elekọta mmadụ, ma na -atụnye ụtụ na iwu akụ na ụba obodo.
● Ọrụ dịịrị mmadụ: Companylọ ọrụ anyị na -elekwasị anya mgbe niile n'ịkwalite ọrụ nke ndị bi na mpaghara, ụmụ nwanyị, obere agbụrụ na ụmụ akwụkwọ kọleji, ma na -agba mbọ ịbawanye ohere ọrụ mpaghara.
● Ọrụ gburugburu ebe obibi: Anyị na -anwa ịchọta ihe ndị ọzọ na -eme gburugburu ebe obibi na ihe ndị nwere ike imebi emebi iji meziwanye mmepụta, iji mee akụkụ anyị iji nweta ụwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. N'ihe banyere ịdị mma, anyị na -ekwusi ike na -eme mgbakwunye, yana na mbelata carbon, anyị na -agba mbọ ime mwepu. N'okporo ụzọ nchekwa gburugburu ebe obibi na ịchekwa ike, anyị na -eme ihe.
Anyị na-agbaso ụkpụrụ '' ndị mmadụ '', na-asọpụrụ ma na-emeso onye ọrụ ọ bụla nha anya, na-echekwa ma na-echekwa ikike na ọdịmma nke ndị ọrụ, na-a attentiona ntị na mmepe ọrụ yana ahụike anụ ahụ na nke uche nke ndị ọrụ, ma na-agba mbọ imepụta usoro ịkekọrịta uru n'etiti ụlọ ọrụ na ndị ọrụ.
N'ihe gbasara ikike mmadụ, ụlọ ọrụ anyị na -emeso ndị ọrụ otu mba na mpaghara dị iche iche, agbụrụ, agbụrụ, okike, nkwenkwe okpukpe na nzụlite omenala. Anyị machibidoro ịrụ ọrụ ụmụaka, ma jụ ụdị ọrụ mmanye na mmanye. Companylọ ọrụ anyị na -elekwasị anya mgbe niile n'ịkwalite ọrụ nke ndị bi na mpaghara, ụmụ nwanyị, obere agbụrụ na ụmụ akwụkwọ kọleji, ma na -agba mbọ ịbawanye ohere ọrụ mpaghara.
ỊTALI: DEFONSECA, KAPPA, COOP
Onye na -emekọ ihe ọnụ
Akpụkpọ ụkwụ Jinjiang Qunli
Jinjiang Kukujia Akpụkpọ ụkwụ
Akpụkpọ ụkwụ Jinjiang Topshark